Khipha ku-internet 10 × 10 Umbala Ogcwele Ephrintiwe Wokukhangisa Itende Ukwakha kanye Factory | UJesson Flag Ubuciko Nemisebenzi
10 × 10 Itende Lokukhangisa Eliprintiwe Lemibala Egcwele
Itende lokukhangisa le-10 × 10 noma itende elivelayo lingesinye sezixazululo ezithandwa kakhulu zokubonisa cishe zonke izinhlobo zemicimbi nemisebenzi.
Phezulu kwetende kuyaphrintwa kuthungwe i-600D Polyester. Idayi yethu sublimation ephrintiwe etendeni phezulu ingaqinisekisa ukuthi ucacile futhi ukhaliphile umbala. Uma ufuna ukwehluka phakathi kwedokodo lombukiso wezohwebo, nakanjani udinga itende lokukhangisa langokwezifiso.
Sithumele i-imeyili Thenga Manje
Isixazululo Sokukhonjiswa Kwobungcweti, Itende Le-Quality Canopy
I-CFM inikezelwe ngokunikela ngamatende wethebhu yekhwalithi engcono kakhulu nephrimiyamu enezinketho zokwenza ngokwezifiso. Sizama konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende athola indawo efaneleke kakhulu yokubonisa imicimbi yawo yangaphakathi nangaphandle.
Khetha itende lombhede le-10x10, omunye wemikhiqizo yethu ethandwa kakhulu, izinkampani zithola ithuluzi lokuphromotha elenzelwe ukusetshenziswa okulula nemiphumela emikhulu. Kuvame ukusetshenziselwa ukukhushulwa komkhiqizo njengombukiso wezohwebo noma umbukiso. Kuyahlukahluka impela, kepha, futhi kusebenza kahle cishe kunoma yisiphi isimo.
Amatende Wokukhangisa Ahlala Njalo, Ahlala Njalo futhi Ahehayo
I-canopy yethu yokwenziwa ngokwezifiso iyithuluzi elinamandla lokumaketha. Uma usebenzisa amatende wethu wesiko, uthola amandla okuwamisa futhi uwabeke lapho ungathanda khona. Izindwangu ezikhethekile esizisebenzisayo zivimbela kakhulu ilangabi, zinikeza ukuvikelwa kwe-UV, futhi zivinjelwe amanzi. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa okugcwele ngaphakathi nangaphandle kwabaqashi.
Umbala Ogcwele Wombala Odayiwe-Umbala, Ocacile Noqhakazile
Esinye sezici ezinhle kakhulu zetende le-canopy elingu-10 * 10 izici zalo ezivelele zokukhangisa. Uma kukhulunywa ngamatende okuphromotha, lawa ayagqama. Amatende wokukhangisa esiwanikezayo avumela uphawu lwelogo noma lokuphrinta isiqubulo. La matende asebenza kahle kusetshenzisweni sedayi esetshenziswa kakhulu, esiqinisekisa izithombe ezipholile nezicacile eziphrintiwe.
Izinketho ezahlukahlukene zokuhlangabezana nezidingo zakho
Kuleli tende lokumaketha lomcimbi le-10x10ft, sinikela ngezinhlobo ezintathu zamafreyimu etende, isikwele se-aluminium 31mm tube, i-hex aluminium 40mm tube kanye ne-hex aluminium 50mm tube. Uhlaka lwetende oluyisikwele olungama-31mm no-40mm hex frame frame kusindisa kakhulu isabelomali, futhi ifreyimu yetende engu-50mm hex ngumsebenzi osindayo futhi osetshenziselwa isikhathi eside.
Ngaphandle kozimele bomsebenzi osindayo, futhi sinikela ngezesekeli zochungechunge, njenge-sandbag, intambo nensimbi yomhlabathi, ukukusiza ukuthi uqinise ukuzinza kwedokodo lakho lokubonisa kwesinye isimo sezulu esinomoya.
Itende Flag Mount Umnikazi
Intambo & Ground Spike
Insizakalo Yokuphrinta Yomdlalo Engafani
I-CFM inikeza itende lombhede elenziwe ngokwezifiso kanye nelikhulu ngokwezifiso. Siqoqe cishe zonke izinhlobo zokubonisa ozimele bamatende ze-10x10ft, 10x15ft ne-10x20ft. Siphe usayizi wozimele wakho futhi singasiza ukwenza ngokwezifiso phezulu kwetende ukukufanisa.
Umbuzo: Ingabe umbala wama-hems ungahambelana nombala wetende?
A: Yebo, sizokhetha ama-hems anombala ofanayo ngokususelwa kumbala womhlaba wetende.
Q: Ungakwazi ukwenza i-canopy noma udonga oluphelele ngocezu olulodwa?
A: Sithonywe osayizi abalinganiselwe bezindwangu, sizokwenza izingcezu ezimbili zihlanganiswe ndawonye ngobungcweti nangomthungo ukuqinisekisa amalogo ahlanganisiwe futhi aphelele.
Q: Ungakugcina kanjani ukuzinza kwetende ekusetshenzisweni kwangaphandle?
A: Izindlela ezintathu zokukhulisa ukuzinza ziyatholakala ngenketho yakho.
l Ugoqo lomoya olunesaka
l bopha ashintshekayo ezinezintambo
l Ama-Velcros anesikhwama sesihlabathi
Q: Ungakugwema kanjani ukuvuza kwamanzi ekusetshenzisweni kwangaphandle?
IMP: Sizosebenzisa amateyipu omoya ashisayo kuyo yonke imigqa yomthungo ukugwema ukuvuza.
Q: Ungalihlanza kanjani itende?
IMP: Uma ucabangela ukumbozwa kwendwangu, kungcono ungasebenzisi isihlanzi. Ukusula izindawo ezingcolile ngensipho emnene kuyisinqumo esihle.
Q: Ungakwazi ukwenza ngokwezifiso ukuphrinta ukufanisa i-hardware yami?
A: Yebo, noma ngabe uyithathaphi i-hardware yakho yokubonisa futhi noma ngabe unhloboni yehadiwe yokubonisa onayo, singaphrinta imidwebo eqondile ukuyifanisa nayo.
Q: Uwupakisha kanjani umdwebo wetende ne-hardware?
A: Ngokuvamile, sizobe ukupakisha graphic itende, hardware, futhi isondo iphakethe ngokwehlukana ukugwema ukulimala amasondo zokuhamba.
Itende Le-10x15 Canopy
10 × 20 Ngokwezifiso Pop Up Itende
Khombisa Ukungezwani Indwangu Khombisa
Indwangu Eligobile Ugaxekile Ekhombisa
Indwangu Banner Stand- Standard
Ithebula Elihlanganisiwe Limboza Emuva NgeSlits
Ithebula Elihlanganisiwe Limboza Emuva Nge-Zipper
Amakhava Wethebula Elingene nge-Open Back
Amakhava Wethebula Lesitayela Esijwayelekile
Eqondile Indwangu Ugaxekile Ekhombisa
Ukuqina Kwengxabano Yendwangu Eqondile
Amathebula Wethebula Elungisiwe